Fiantohana mavesatra mandritra ny fitondrana vohoka
Ny fahazoana mavesatra mandritra ny fitondrana vohoka dia eo ambany fifehezan'ny dokotera. Raha ny marina, ity endri-tsoratra ity dia ahafahantsika manome fanombanana mazava ny fivoaran'ny foetus ary amin'ny fotoana mba hamaritana ny laika, raha misy izany. Andeha isika hiresaka amin'ny antsipiriany momba ity mari-pamantarana ity ary hitoetra amin'ny antsipirihany momba ny fomba tokony hitrangan'ny rongony amin'ny reny mitaiza isaky ny herinandro vohoka mandritra ny fizotry ny fitondrana.
Ahoana ny fiovan'ny lanjan'ny vehivavy bevohoka?
Voalohany aloha, tsy maintsy tsaroana fa mba hahazoana mari-pahaizana marina, dia tsy maintsy mandanja ny maraina isika, rehefa mandeha any amin'ny toeram-pisakafoana sy alohan'ny sakafo voalohany.
Raha miresaka momba ny tahan'ny fahazoana mavesatra mandritra ny fitondrana vohoka dia 9-14 kg (miaraka amin'ny 16-21 kg). Ny fatiantoka toy izany dia noho ny maha-samihafa ny vatan'ny vehivavy bevohoka ary koa ny lanjany voalohany, i.e. before conception.
Noho izany, ho an'ny trimestre voalohany ny renim-pianakaviana amin'ny hoavy dia "henjana kokoa" mihoatra ny 2 kg. Na izany aza, ara-bakiteny avy amin'ny 13-14 herinandro ny fitondrantena, rehefa misy fiandohan'ny fivoaran'ny fitomboan'ny taova voajanahary voajanahary, dia manampy 1 kg isam-bolana ny vehivavy bevohoka. Noho izany isan-kerinandro amin'ny fitondrantena dia mitombo 300 g ny lanjany. Hatramin'ny 7 volana dia mety hahatratra 400 g ny vidin'ny lanja isan-kerinandro.
Mba hanombanana tsara ny lanjan'ny vatana, ampitahao ny tombony azo avy amin'ny fahavoazana mandritra ny fitondrana vohoka miaraka amin'ny fitsipika, ny dokotera dia mampiasa ny latabatra. Ao anatin'izany, araka ny endriky ny vatana (BMI) misy vatam-paty , dia misy lanjany mifanaraka amin'ny fe-potoana.
Inona no mahatonga ny fiovana amin'ny lanjan'ny vatana amin'ny vehivavy bevohoka?
Araka ny fantatrao, ny fihenan'ny lehibe dia noho ny lanjan'ilay zazakely, izay raisin'ny vehivavy ao an-kibony - eo amin'ny 3-4 kg. Ny habetsaky ny flux amniotique tafiditra ao amin'ny lanjany , ny tahiry fetsy, dia nitombo ny haben'ny tranonjaza. Ankoatra izany, mitombo ihany koa ny habetsahan'ny ratra mivadika.
Tonus ao amin'ny fitondrana vohoka - soritr'aretina
ESR amin'ny fitondrana vohoka
Ny fandaharam-potoanan'ny BT mandritra ny fitondrana vohoka - ohatra
Asidra folika - fiantraikany hafa
Ahoana no fomba fitsaboana hemorrhoid aorian'ny fiterahana?
Rahoviana no lany ilay kibo talohan'ny nahaterahany?
Monural nandritra ny fitondrana vohoka
Thyrotoxicose sy ny bevohoka
Ny placenta eny amin'ny rindrina
Ny hafanana fahavaratra 38
Syphilis amin'ny fahantrana
Azo atao ve ny manao kiraro bevohoka?
Ny holatra mofomamy - ny sakafo matsiro tsara indrindra ho an'ny sakafo tsotra avy amin'ny holatra
Inona no hanina amin'ny sakafo hariva ao amin'ny oven?
Inona no dikan'ny firosoana bi
Salpingoophoritis - fitsaboana
Fiantrana aorian'ny fiterahana
Fantsona volo chiffon
Sarafana ho an'ny fahavaratra manontolo 2013
Amin'ny inona no manao akanjo jiro beige?
Fanafody fampidiran-drano miaraka amin'ny lactostasis
Lasa ray aman-dreny voalohany i Kathy Lawes sy i Adam Shapiro
Vodin-kazo eny amin'ny rihana hazo
Ahoana no hiantsoan'i Satana?
Sakafo ara-pahasalamana ho an'ny fahavoazana
Toetrandro tandrefana amin'ny akanjo
Fahatelo fahatelo amin'ny maha-bevohoka
Polisy mahavariana 2015
Famaritana ny tanana
Ahoana ny fampiasana ny tiana amin'ny selfie amin'ny bokotra iray?